မသိလို့ပါ - MYSTERY ZILLION
July 2014 edited July 2014 in Wordpress
ကျွန်တော်က အခုမှ wordpress ကို စတင်လေ့လာနတော ပါ
ကျွန်တော် menu bar လေးတွေ လုပ်တတ်ချင်လို့ပါ အဲ့တာ ဆိုဒ်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် စာအုပ်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြောပြတာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သိချင်လို့ပါလိုချင်လို့ပါ
template ကို ပြင်ချင်တာလား ? ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လို menu bar ကို ပြောတာလဲ ?
wordpress မှာ ပါတဲ့ Appearance အောက် က menu က template နဲ့ သက်ဆိုင်တယ်။
ပာုတ်အစ်ကို Menu bar ထပ်ထည့်ချင်တာ မလုပ်တတ်လို့ပါ ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ဆင့်ချင်းဆီ သိချင်လို့ပါ
@WorkHardDreamBig‌ , do you want to do customise template ? If you want to put , anywhere , you need to do template customisation.